Kungani Okokuzithokozisa kwe-Airbnb engikubungazayo kukhanseliwe? | Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Ngo-March 11, 2020, i-World Health Organization (WHO) yamemezela ukuqubuka kwe-COVID-19 njengobhubhane lomhlaba wonke. Ngokuya kwesiqondiso sohulumeni nochwepheshe bezempilo yomphakathi maqondana nokuziqhelelanisa nomphakathi, Okokuzithokozisa kwe-Airbnb kumisiwe okwesikhashana ngo-March 18, 2020, futhi ukumiswa okwesikhashana kuzoqhubeka kuze kube okungenani ngo-April 3, 2020 ukuze kuvikeleke impilo nokuphepha komphakathi wethu.
Sikholelwa wukuthi ukuthatha lesi sinyathelo esikhathini esifushane kuyadingeka ukuze senze ingxenye yethu ukunciphisa ukubhebhetheka kwegciwane, futhi esikhathini eside kuvikele okokuzithokozisa njengendlela ethenjwayo yokuxhumana nabanye emhlabeni jikelele.
Uma ubunokubhukha phakathi kuka-March 18 no-April 3, 2020, ukubhukha sekukhanselwe ngokuzenzakalelayo. Izivakashi zakho zizobuyiselwa noma sezibuyiselwe imali ephelele, kuhlanganise nokubuyiselwa kwawo wonke amanani esevisi ye-Airbnb. I-Airbnb ngeke igcine noma yiziphi izimali ezihlobene nokubhukha.
Ukubhukha okokuzithokozisa ngemva kuka-April 3
Izivakashi zingabhukha noma iyiphi into eyenziwayo ekhalendeni yakho ngemva kuka-April 3, 2020. I-Airbnb izoqhubeka nokuqapha isimo emhlabeni jikelele, futhi sizowazisa umphakathi wethu uma isimo sishintsha.
Izinqubomgomo zokukhanselwa Kokokuzithokozisa kwe-Airbnb
Lapho Okokuzithokozisa kwe-Airbnb kuqhubeka, inqubomgomo yokukhansela Okokuzithokozisa izosebenza kunoma yikuphi ukukhansela. Ukukhansela okuhlobene ne-COVID-19 kuchazwa ngaphansi komthetho wethu wezimo ezingalindelekile. Hlola isihloko sethu sezimo ezingalindelekile nge-COVID-19 ukuze ufunde ngokuhlanganiswa kwezimo ezihlobene ne-COVID-19.
Iyini inqubomgomo yokukhansela Okokuzithokozisa kwe-Airbnb?